जाडो चायाँ पर्ने र कपाल झर्ने समस्याबाट पिडित हुनुहुन्छ ? अनुहारमा चमक छैन ? त्यसो हो भने यसो गर्नुहोस् – वरिष्ठ ब्युटीसियन सुष्मा महरा « Intro Nepal
जाडो चायाँ पर्ने र कपाल झर्ने समस्याबाट पिडित हुनुहुन्छ ? अनुहारमा चमक छैन ? त्यसो हो भने यसो गर्नुहोस् – वरिष्ठ ब्युटीसियन सुष्मा महरा
Published On : २६ मंसिर २०७६, बिहीबार १३:०९
जाडो भन्ने बित्तीकै सबको मुखबाट ‘आछु’ भन्ने शब्द आई हाल्छ । झन यो सालको जाडो धेरैनै बडीराखेको छ । त्यसैले यस्तो जाडोमा खानाको साथ हाम्रो शरीर पनी राम्ररी सियार सुशार गर्नु पर्छ । जाडो महिनामा चिसोका कारण छालामा विभिन्न समस्याहरु देखा पर्दछन् । छाला फुट्ने, अनुहार सुख्खा हुने, चाउरीने, हात–गोडा फुट्ने, कपाल झर्ने जस्ता समस्याले सबैलाई पीडित पारिराखेकै हुन्छ । यी सम्पूर्ण समस्याहरुको हल गरेर जाडो समयमा आफ्नो शरीरमा सुन्दरता र चमकपन ल्याउन सकिन्छ । तर त्यसकोलागि आफुले समय भने निकाल्न सक्नु पर्छ ।
शरीरमा चमकपन कसरी ल्याउने ?
छाला फुट्ने, चाउरीपन देखिने, सुख्खा हुनबाट बचाउन शरीरमा मोस्चर गर्नुपर्छ । मोस्चरको कमीले अनुहारमा चमकपन हुँदैन । त्यसैले गर्दा यस्ता समस्याहरु देखा पर्छन । अनुहारमा चमकपन ल्याउनका लागि मोस्चर गर्नुपर्छ । भिटामीन ए क्रिम प्रयोग गरेर मोस्चर गर्न सकिन्छ । छाला एकदम सुख्खा छ भने राति सुत्दा गिल्सिंग, मस्टूराजार, कोल्डक्रिम लगायर सुत्ने गर्नुपर्छ । जस्ले छाला नरम र मुलायम बनाउइ राख्छ । तर कुर्कुच्चा फुट्ने समस्या सर्वप्रथम त सफाइको कमिले नै हुन जान्छ । पैताला भनेको मोस्चर एकदमै कम हुने ठाउँ हो र शरीरको सबैभन्दा सुख्खा ठाउँ कुर्कुचा हो । त्यसैले राती सुत्नु अगाडी मन तातो पानीले खुट्टा धुने बानी गर्नुपर्दछ । त्यसपछि सुत्नु अगाडीसम्म मोजा लगाउने र सुत्दा खेरी मोजा खोलेर सुत्ने बानी गरियो भने बिहान खुट्टा नरम र कलिलो देखिन्छ ।
मानिसको दैनिक जिवनयापनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने अङ्ग हात हो । पुरुषको तुलनामा महिलाले घरयासी काम गर्दा बढी हातकै जरुरत पर्दछ । भाडा माझ्नेदेखि कोठा सफा गर्नेसम्मको अझ जाडो वा चिसोको समयमा त महिलाहरु यो समस्याबाट गुज्रिनु परेको पनि देखिन्छ अझैँ । तर, यसको घरायसी उपचार सजिलो छ । राती सुत्दा मनतातो पानीले हात धुने अनि हातमा ग्लिसरिन रोज वाटर राखेर सुत्दा हात नरम र गोरो पनि देखिन्छ ।
जाडो समयमा कपालसम्बन्धि विशेष गरेर दुईवटा समस्या देखा पर्छन । चायाँ पर्ने र कपाल झर्ने । कपाल जाडोमा धेरै गुम्स्याएर राख्नु, महिनौँ नधुनु प्रमुख समस्याहरु हुन् । त्यसो त गर्मीमा भन्दा जाडोमा कपालको हेरचाह कम हुन्छ । त्यस्तै, कपाल धुदा तातोपानीको प्रयोगले पनि कपालको जरा कमजोर भइदिन्छ । त्यसैले पानीको सवालमा मनतातो पानीका प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसकारण कपाललाई चाहिने प्रोटिन तेलमा पाइन्छ । यद्यपि, दिउसोको समयमा कपालमा मन तातो तेल लगाएर मसाज गर्ने र एक डेड घण्टा पछि नुहाउने गर्दा कपाललाई चाहिने प्रोटिन पनि मिल्छ र यस्का साथै हामीले जाडोको समय शरीरको अंगलाई चिसोले नछोवोस भनेर बाक्लो तातो न्यानो कपडा लगाउने गर्दा हामीले आफ्नो शरीरलाई चिसोबाट जोगाउन सक्छौ ।
महिला उद्यमी / वरिष्ठ ब्युटीसियन